Ugbo Deer na Olympia, Jelenov Greben - Rogaška-Slatina
Europe Slovenia Rogaşka Slatina
Ugbo Deer na Olympia
Adreesị: Olimje 90, 3254 Podčetrtek, Slovenia;
Mkpokọta : jelenov-greben.si;
Ekwentị: +386 3 582 92 91;
Oge mmeghe: kwa ụbọchị site na 08:00 ruo 18:00.
N'ihe dị nso na spa spa spa Slovenia Rogaska-Slatina , e nwere ebe dị ịtụnanya - ugbo deer. Na ya, ndị njem nleta nwere ike ịhụ ezigbo onye ndu anụ, ọ bụghị naanị ịhụ, kama na-azụ ma na-eri nri. Ụmụ anụmanụ na-ata nri na-emepe emepe na ndị mmadụ. Ya mere, mgbe ị rutere, ị ga-adị njikere ka ndị niile bi n'ugbo ahụ bịa "ndị ọbịa" ozugbo.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị banyere ugbo deer na Olimya?
Ugbo Deer na Olympia bụ ebe dị egwu na obere obodo nke Terme Olimia dị nso n'ebe obibi ndị mọnk ochie. A haziri ugbo n'elu ugwu nke nwere echiche magburu onwe ya. Ọ na-adọrọ mmasị ịhụ na ọ bụghị nanị na ọgbọ, ma na-aga ije, nweta ikuku ọhụrụ. Ogbo ugbo bu otu n'ime ebe kacha mma na Slovenia , nke e mebere maka ezinulo.
Ụmụaka ga-enwe obi ụtọ na udo na ụzụ nke na-eri nri dị nso, na ndị okenye site na ọdịdị dị ịtụnanya. Ndị ọrụ nke ugbo ahụ nwere ike iri nri maka ụmụ anụmanụ na-elekọta ha. Naanị ị ga-adị njikere ka ọ laa n'iyi na anya nke anya gị.
N'ala ubi ahụ, e nwere ihe oriri niile maka ndị nlegharị anya, gụnyere washstand na mmiri ọkụ. Ị nwere ike iri nri na ụlọ oriri na-edozi ahụ, nke na-enye nri Slovenian, mmanya na mmiri vaịn na mpaghara. Nchịkọta na-agụnye venison.
A pụrụ ịzụta ngwaahịa ndị a n'elu ụlọ ahịa na-emeghe n'ugbo. Akụkụ ya na-agụnye ihe ndị na-acha odo odo na cherry nke a na-arụ n'ụlọ obibi ndị mọnk, mmanụ aṅụ, ihe oriri na-esi ísì ụtọ na mmiri vaịn. Nri ụtọ bụ ịzụta ite nke jams dị iche iche.
N'ịbụ ndị nwere afọ ojuju, ị nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ n'èzí. Dị ka ihe atụ, ịgba ụta, ịgba chaa chaa ma ọ bụ badminton. I nwekwara ike ịrịgo balloon dị ọkụ ma ọ bụ gaa na ogbako ụlọ ọrụ pottery, ebe e gosipụtara ngwaahịa mara mma. Enwere ebe egwuregwu pụrụ iche maka ụmụaka, ebe ha ga-eji obi ụtọ na-edu oge.
Ị gaa n'ugbo ala deer bụ ahụmahụ a na-echefu echefu, ebe ọ bụ na ebe a, ị nwere ike ịhụ ụmụ anụmanụ ndị maara na kaadị Krismas na Santa Claus. Ịkwụsị na Terme Olimia bụ ihe dị iche na ọkwa ọhụrụ dị iche iche, ohere ịmatakwu ọdịdị nke Slovenia na ọdịnala ya. Ndị nwe ugbo ahụ na-ahazi njem ndị dị nso, ihe omume na-adọrọ mmasị ma na-atụgharị uche na onyinye. Isi ọnọdụ - ọnụ ọgụgụ nke otu a ga - abụ mmadụ 10 ma ọ bụ karịa.
Chọpụta ihe banyere ugbo, zụta ngwaahịa ma dee ụlọ na ụlọ ọrụ gọọmentị. Ugbo ya na otutu ndi agha bu nani kilomita 4.5 site na obodo ahu wee biri 8 hectare, nke mere na enwere ebe onye obula choro izuike site na obodo.
Kedu esi enweta ebe ahụ?
Ugbo ala deer, nke adreesị ya dịka Olimya, Slovenia , bụ ebe ọnọdụ, nke dị mfe ịnweta site na igafe ọha. Ị nwere ike ịnweta ebe a site na Rogaska-Slatina, nke dị na nso nso. Ọ bụrụ na ị si Ljubljana , ebe dị anya ga-adị ihe dị ka kilomita 120, ịnwere ike ịbanye ebe ahụ site na bọs.
Chọọchị Ọtọdọks (Shkoder)
Chọọchị St. Mary
Njem na Cyprus si Limassol
Reykjavik Ụlọ Nzukọ Alaeze
Otu dị mma, mana abụọ dị mma: kpakpando iri abụọ, na-azụ ụmụ ejima
Ume ndi nwanyi
Kedu otu esi ahọrọ ihe nkpuchi?
Ọkụ Chicken dị mma
Nkwupụta nzuzo: Meryl Streep zara ebubo nke ịkọ aha ọma nke Harvey Weinstein
Alopecia - Ihe kpatara
Cystitis na ọbara na njedebe nke urination
Ụlọ ihe owuwu
Otu esi achọputa onye na-ehicha ihe mkpocha - ndụmọdụ bara uru na ndụmọdụ ndị bara uru
Nwunye Ndị Eji Nwe Mma
Richard Gere bụ onye isi awọ na-egosi na ọ na-eto eto
Salad "N'okpuru uwe aji" - nhazi uzom
Ihe ọṅụṅụ Apple na-enye nwa ara
Mwepụ nke polyp na endometrial bụ ọrụ na oge mgbake
Hashlama si nwa atụrụ
Pink lichen na ụmụaka
Meat na mushrooms n'ime oven
Bordeaux agba n'ime ime
Kara Delevine bipụtara egwu mbụ ya